Ogaden News Agency (ONA) – Barnaamjkii Aragtida Halgamaaga – Horumarinta Dhaqaale ee Dacaayadda Itobiya iyo Dhabtu Siday Tahay : Somaliya VZ Ogadenya
Barnaamjkii Aragtida Halgamaaga – Horumarinta Dhaqaale ee Dacaayadda Itobiya iyo Dhabtu Siday Tahay : Somaliya VZ Ogadenya
Warbixintii ay WAD Itobiya ugu jawaabaysay maqaalkii uu qoray saxafiga Martin Plaut waxay ku sheegeen in wargaysya caalami ah ay wax kasoo qoreen horumarka ka socda Ogadenya. Waxaan halkaa ku ogaanay inay Itobiya caalamka la dhex socoto dacaayadaa, aan lugaha ku taagnayn.
Si loo fahmo macnaha Horumarin Dhaqaale, Barnaamijka caawa waxaan kaga hadlaynaa Farqiga u dhexeeya Horumarinta Dhaqaale ee Dawlad meel ka talisa laga doonayo inay fuliso iyo Mashaariicda ay dadweynaha iskood u qabsadaan hadday helaan fursad u saamaxaysa, taasoon ka jirin Ogadenya. Su’aasha ay tahay in la’isweydiiyo; Maxay ku kala duwan yihiin shacabka ku nool Somaliya iyo kuwa Ogadenya?
Saan loogu qaadanin in aan dacaayad fidinayno, waxaan tusaale usoo qaadanay wuxuu ka yidhi Dr. Axmad Sheekh oo ahaa Hogaanka Cilmi-baadhista, sababaha keenay Horumar la’aanta ka jirta Ogadenya isagoo sheegay in Tiknoolojiyadii ay iyagu horumariyeen ay ka faa’idaysteen Oromada, Cafarta iyo Shucuubta Koonfureed, hasa ahaatee loo diiday Ogadenya.
Waxaa kaloo aan tusaale ahaan usoo qaadanay maqaal ay dhalinayarada wax ku qoro shabakadda Faallo kaga hadleen siyaabaha loosoo xulayay M/weynaha Kililka intii ka dambaysay Allaha unaxariistee Xassan Jire, taasoo kuu muujinaysa sifooyinka laga doonayo qofka maamulka Jigjiga qabanaya. Waxaa kaloo aan kusoo qaadanay baadhitaan ay sameeyeen SomaliWide oo ka hadlaya siyaabaha loo dhoco miisaaniyadda dalka.
Maqaaladaa ku dhisan aqoonta oo aanan wax faala ah ku darsan waxaan ugu talagalnay inay gogol xaadh u noqdaan barnaamijyadeena dambe een kaga hadli doono mashaariicda la sheegay in laga fuliyo Jigjiga iyo kuwa laga fuliyo dalka intiisa kale. Wixii su’aala ah ee la xidhiidha ama macluumaad dheeri ah noogu soo hagaajiya cinwaanka barnaamijka oo ah;
aragtidahalgamaaga@yahoo.com – ama cinwaanka ONA.
Gabaygii Xaaji Maxamad halkan ka dhagayso :